पहिलोपटक पत्रकार महासंघको प्रत्यक्ष निर्वाचन आज - Rastrakokhabar
पहिलोपटक पत्रकार महासंघको प्रत्यक्ष निर्वाचन आज
२५ चैत्र २०७७, बुधबार ०७:२९
काठमाडौं, २५ चैत । नेपाल पत्रकार महासंघको २६औं महाधिवेसनअन्तर्गत आज काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर एकसाथ निर्वाचन हुँदैछ ।
नेतृत्व चुन्न देशैभर एकसाथ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।
केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित शाखाहरुको नेतृत्व चयनका लागि महासंघले एकसाथ मतदानको व्यवस्था मिलाएको हो । देशभरका करिब एक सय मतदान केन्द्रमा महासंघका १३ हजार सदस्यले मत दिने व्यवस्था मिलाइएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक कपिल काफ्ले जानकारी दिएका छन ।
प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारी (माधव नेपाल समूह) सहित ११ वटा संगठनको साझा उम्मेदवारका रुपमा पोखरेल, प्रेस चौतारी (ओली समूह) सहितको गठबन्धनको उम्मेदवारको रुपमा शर्मा र स्वतन्त्र रुपमा अध्यक्ष पदका लागि बुढाथोकी मैदानमा छन् ।
विहान ९ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने मतदानका लागि कुनै आधिकारिक परिचय पत्र वा नागरिकता चाहिने व्यवस्था गरिएको संयोजक काफ्ले जानकारी दिएका छन ।
Previous Post	आजको राशिफल ( वि. सं. २०७७ चैत्र २५ गते, बुधबार)
Next Post	नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी